CCTV मा यस्तो देखियो, बिच सडकमा मान्छे दु*र्घट*ना या मा*रेर फालेको ? (भिडियो हेर्नुस ) – Charchit Entertainment
पोखरा महानगरपालिका को बुद्ध चोकमा बिहान उज्यालो नहुदै चार बजे तिर प्रहरीको CCTV फुटेजमा एउटा घट*ना देखियो । घ*टनाको फुटेज देखे पछि प्रहरीको टोलि साढे चार बजे तिर उक्त घट*नास्थल पुग्यो । त्यहाँ एक ब्यक्ति मृ*त फेला परे । प्रहरीको मुचुल्कामा अस्प*ताल लादै गर्दा मृ*त्यु भएको उल्लेख भएता पनि CCTV फुटेज हेर्दा उनको त्यही मृ*त्यु भएको देख्न सकिन्छ । सवारी दुर्घ*टना जस्तो पनि देखिन्छ ।
एक तर्फको CCTV फुटेज हेर्दा थोरै परबाट एक ति*ब्र गतिमा आइरहेको सेतो रङ्गको माइक्रो बसले ल*तारेर ल्याएको जस्तो देखिन्छ । तर कहाबाट ल्यायो त्यो देखिदैन । पानी परिरेको अवस्थामा बिहानै को समयमा त्यहा खासै सवारी साधनको चाप पनि देखिदैन । झट्ट हेर्दा कतैबाट मा*रेर त्यहा फा*ले जस्तो पनि देखिन्छ । केहिबेर अगाडि सम्म त्यहा कुनै मानिस देखिदैन तर उक्त माइक्रो बस त्यहाबाट जाने बित्तिकै त्यहा मानिस ल*डि*रहेको देखिन्छ ।
ल*डिर*हेको मानिस भने छट*पटाएको केही देखिदैन । त्यसैले त्यहा ढ*ल्नु भन्दा अगाडि नै मृ*त्यु भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ती ब्यक्ती पर्वत घर भै हाल पोखरा कै गाम बजारमा बस्दै आएका चालीस वर्षीय भुतपुर्व भारतिय सेना भन्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनका परिवारसगँ भने सम्पर्क हुन नसकेको र सम्पर्कको प्रयास भै रहेको प्रहरिले जनाएको छ । घरमा श्रीमतीसगँ सामान्य वि*वाद भएर हिडेको भन्ने केही कुरा आए पनि त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।
बिहान सवेरै भएको घ*टना त्यो पनि CCTV फुटेजबाट प्रहरी आफैले थाहा पाएकोले त्यसबारे प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान थालेको थियो । त्यही भएर पनि त्यहाका स्थानीय बासिन्दालाई यसबारे केही जानकारी नभएको बताउछन । स्थानीय बासिन्दा सगँ त्यसबारे कुरा गर्न खोज्दा; यहाँ यस्तो भएको थियो र ? भन्दै उल्टै प्रश्न गर्छन । CCTV फुटेजमा देखिएको उक्त माइक्रोबसको पनि पहिचन हुन सकेको छैन ।
CCTV को अर्को तिरको फुटेजमा भने कतैबाट मा*रेर त्यहाँ ल्याई फा*ल्दिएको जस्तो पनि देखिन्छ । एकतिरको फुटेजमा केही पनि नदेखिएको माइक्रोबसको अर्को तिरको फुटेजमा भने केही लेखिएको जस्तो देखिन्छ । तर माइक्रोबसको कुनै नम्बर भने फुटेजमा देखिदैन । सेतो रङ्गको माइक्रोबस बस भन्ने मात्र देखिन्छ । मा*रेर त्यहाँ फालेको हो या ठ*क्कर दिएर मृ*त्यु भएको हो त्यो भने पो*स्टमा*र्टम रिपोर्ट पछि मात्र खुल्ने प्रहरिले जनाएको छ । अहिले उक्त माइक्रोबसको खोजी भै रहेको प्रहरीलेले जनाएको छ । ( तल भिडियो हेर्नुस )